Google Pixel Review - News Ọchịchị
The Pixel bụ ihe na-akpali ngwaọrụ. A ekwentị mere site Google, onye rụrụ ihe ndị Android. The software n'akụkụ bụ ọkaibe: na smoothest, Kacha ọhụrụ na kasị mma kachasị version nke Android dị n'oge na-kasị eleghị anya ga-eme n'ọdịnihu, ihe na ngwa mmelite na-abịa ogologo si Google.
Mbụ smartphone mere site Google site ọkọ akọrọ ọtụtụ igbe, ma ọ bụghị nnọọ ndị stellar ụwa beater ụfọdụ pụrụ ịtụ anya
Isiokwu a na-akpọ “Google Pixel review: ihe iPhone beater ma ọ bụghị nnọọ ihe gam akporo eze” e dere site Samuel Gibbs, n'ihi na theguardian.com on Thursday 20 October 2016 06.00 UTC
Google emesịala malitere onwe-ika smartphone, na Pixel, iji maa Apple isi on ma nye a adịchaghị Android ahụmahụ na ngwaike kwekọọ n'ihe na-software nke ndị na--eme ka..
The ọhụrụ smartphone Ọma Google si Nexus akara nke ngwaọrụ na ụlọ ọrụ na-azọrọ na ndị Pixel bụ now 100% Google, n'adịghị ka Nexus ngwaọrụ ebe Google nyere ihe software na nwere ụfọdụ input n'ime ngwaọrụ ma ọ bụghị ngụkọta akara. The Pixel ekwentị enyekwara Pixel C Android mbadamba na Chromebook Pixel dị ka Google mbụ na-ụlọ ngwaọrụ.
Ma n'ihi na Google, na Pixel a abụghị nnọọ smartphone, ọ bụ a referendum on ma Google dị ka a ika akanyam.
The Pixel bụ thicker na otu njedebe, ma ị nwere ike ọ gaghị achọpụta ma ọ bụrụ na mmadụ kwuru ya. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Na ihe niile na-metal ahu, niile-iko ngosi, rock-siri ike Mee, akara mkpisiaka nyocha na ekweisi anya, na Pixel akọrọ ọtụtụ n'ime igbe na-atụ anya nke n'elu-ọgwụgwụ smartphone, ma e wezụga n'ihi a enweghị waterproofing. Ọ bụ ubé dị iche iche na-achọ kwa, na otu iko panel ekpuchi n'elu-atọ azụ na osisi pịrị ọnụ akanye-ọdịdị nke ahụ bụ thicker na elu na odịbe ọ bụla igwefoto akpụ. Olee otú mara mma ọ bụ dị ka a haziri abahade uche.
The Pixel-adị ukwuu n'aka, na omume ọma curved n'ọnụ na ewepụghị n'akụkụ na-eme ka ọ dị mfe adịgide ma jigide. Ọ bụ na-adịghị kwa oké, na nkpirikpi udi nke pụtara na bit na ị jide bụ mkpa na e nwere ezigbo arọ nkesa.
Na Pixel n'ala ala ya na ọ bụ 7.3mm oké na ya dịrị ihe 143g. Tụnyere ndị mpi, ya bụ Apple si 7.1mm oké, 138g iPhone 7 na Samsung si 7.9mm oké, 152g Galaxy S7, na Pixel bụ ahụ dị n'etiti. Ọ bụ thinner karịa ikpeazụ afọ 7.9mm oké Nexus 5X na ma 7g arọ.
The Pixel nwere a 5in zuru HD AMOLED ihuenyo na n'ihu, nke na-eme ya otu n'ime ndị nta adịchaghị smartphones dị, na ọtụtụ ndị ọzọ na-enwe 5.1in ma ọ bụ ibu hụ na i meziri. The ngosi bụ crisp na ewu ewu, na miri ojii na magburu onwe ikiri akụkụ. Ọ bụ dịtụ mfe na-agụ na kpọmkwem ìhè anyanwụ kwa, -eme ka ọ onye nke kasị mma ngosipụta ruo eruo a smartphone, ọ bụ ezie na ọ bụghị ezi dị ka ihe ọma dị ka Samsung ji mma.
Ihuenyo: 5na 1080p AMOLED (441ppi)
Processor: quad-isi Snapdragon Qualcomm 821
Nchekwa: 32 ma ọ bụ 128GB
Sistemụ nrụọrụ: Android 7.1 Nougat
Igwefoto: 12.3MP n'azụ igwefoto, 8MP n'ihu-eche ihu igwefoto
Njikọta: LTE, Wi-Fi, NFC, Bluetooth 4.2, USB-C na GPS
Akụkụ: 143.8 x 69.5 x 7.3-8.6 mm
Google si Pixel ka nwere a headphone anya, ma ọ dịghị n'ezie na-eso bụla ekweisi na igbe. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Pixel bụ otu n'ime ndị mbụ handsets iji Qualcomm ọhụrụ Snapdragon 821 processor, nke bụ nnoo a tweaked version nke 820 dị na OnePlus 3 na ndị ọzọ na smartphones.
Performance abụghị otu ihe iseokwu. Si Prisma oyiyi na-graphically kpụ ọkụ n'ọnụ egwuregwu, na Pixel ata ata site na ihe niile m tụrụ ya, nke ị ga-atụ anya ka a £ 600 smartphone. Ọ bụ otu n'ime ndị kasị dị ike gam akporo smartphones ugbu a. Ọ na-ọma kachasị, snappy, ngwa ngwa na, ikekwe kasị na Baịbụl, ọ dịghị esi na-ekpo ọkụ mgbe n'okpuru ibu.
Kasị smartphones ikpo elu nke ukwu mgbe nbudata a otutu data, dị ka mgbe mwube a ekwentị, ma Pixel mere abụghị. Ọ na-gbara ọsọ egwuregwu ndị dị otú ahụ dị ka Dan na Man-enweghị kpo oku ke nwetụrụ, ebe ikpeazụ afọ Nexus 5X ghọrọ otú ahụ na-ekpo ọkụ.
The Pixel bụkwa onye mbụ smartphone na-gbaara maka ojiji na Google ọhụrụ NRỌ mebere eziokwu n'elu ikpo okwu. Ma nke ahụ pụtara ihe ọ bụla nke bụ eziokwu ga-adabere na otú ihe ịga nke ọma Google si ọhụrụ push maka VR agwụ elu na-. Ọ bụghị ma dị, oleezi otú ọ rụrụ ka amaghi.
A ụbọchị n'etiti ebubo
The USB na otu ọkà okwu na ala (ekpe-n'akụkụ oghere). Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Na iji Pixel dị ka m bụ isi ngwaọrụ, O meruru nanị n'elu 24 awa na-enweghị odori, ijikwa awa atọ ngwa ojiji na nchọgharị, ọtụtụ narị ozi ịntanetị na push Ịma Ọkwa, a di na nwunye nke photos, awa ise nke music n'elu Bluetooth ekweisi na iberibe game of Dan na Man n'oge m otu awa na minit 20 n'ụgbọ okporo ígwè na-aga aga ma na-alọta ọrụ. Ọ pụtara na ị ga-esi site na otu ụbọchị ma a n'abalị si, ma ị ga-ana ya n'abalị ma ọ bụ na ọ ga-abụ na ọtụtụ nwụrụ tupu ị ga-esi na-arụ ọrụ na-esote ụbọchị.
The Pixel ka ngwa ngwa odori site USB-C ike nnyefe nkọwapụta, ọ bụghị Qualcomm si QuickCharge ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ accelerated odori usoro. A zuru ụgwọ site kpamkpam ewepụghị were otu awa 45 nkeji, -eru 25% ikike na ihe 15 nkeji, 40% na 25 nkeji na 66% na banyere 50 nkeji. Ọ bụghị ndị kasị Nchaji smartphone dị, ma ọ bụ nke ukwu ngwa ngwa karịa Apple si iPhone 7.
Pixel abịa arụnyere na Google si ọhụrụ obubata zuru ezu na a ọhụrụ-anya homescreen na-eji ngwa drawer. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Pixel abịa na ọhụrụ version nke Android 7.1 Nougat na bụ nke mbụ smartphone na-eme otú. Ọtụtụ ndị ọzọ na smartphones na-ka na-agba ọsọ Android 6 Marshmallow, ka naanị version 7 ma ọ bụ 7.1.
Android 7.0 Nougat ẹkenam ụfọdụ siri ike batrị na oge na-azọpụta atụmatụ, nke niile nọ ugbu na Pixel. Google si version of Nougat 7.1 ewebata a ole na ole ọzọ ọhụrụ na bara uru ihe gụnyere ike igbochi visual alerts mgbe adịghị ichegbu na-arụ ọrụ, dị ka na-egbu maramara Ikanam ngosi ìhè - kemfe n'ihi na ndị na-ana ha ama n'otu ntabi anya-esote isi ha.
The Pixel nwekwara a ọhụrụ version nke Google si obubata - na mbụ maara dị ka Google Ugbu a obubata - nke Ẹnam ekese na Nexus ngwaọrụ na dị maka ndị ọzọ Android smartphones na mbadamba na Play Store. The Pixel si obubata nwere ọhụrụ-anya Google search mmanya na home ihuenyo weather wijetị, ma nke nwere ike wepụrụ na ịmachi vetikal akara ngosi ohere na-anọ e nyere ahịrị, na now odịbe ngwa drawer n'azụ a swipe si ise icon dum tree na ala nke ihuenyo.
Obubata Ụzọ mkpirisi mmapụta on a tap ma jide, ma ike-adọkpụrụ si menu na-eme ka a raara onwe ya nye akara ngosi maka shortcut na homescreen. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Nnukwu ọtọ mgbanwe maka n'ụlọ ihuenyo, Otú ọ dị, bụ ọhụrụ obubata Ụzọ mkpirisi, nke akpa nnọọ Apple si 3D aka mmegharị on iOS, ma na-enweghị mkpa maka a mgbali-chebaara ihuenyo. Ịme ọpịpị na-ejide ihe ngwa icon Pop bu mmiri ogwu a ndepụta nke ngwa omume, site na ekwentị oku kpọmkwem ka ndị mmadụ na-adịbeghị anya ozi ederede, nhọrọ ima elu ogologo a selfie ma ọ bụ video na igwefoto ngwa, na ndị ọzọ yiri ọrụ.
Obubata Ụzọ mkpirisi nwekwara ike dọkpụrụ site na isi ngwa ngwa buttons n'elu na Ihuenyo mbu, nke pụtara a button maka jumping ogologo n'ihu-n'ihu igwefoto maka a selfie pụrụ enịm bụla na home ihuenyo maka onye-tap ohere.
Ọtụtụ n'ime Google si ngwa ọdịnala na-akwado ndị ọhụrụ mma, mgbe ụfọdụ atọ ọzọ na-ngwa ọdịnala, gụnyere Evernote ga-adịghị anya-emelitere ịgbakwunye ngwa omume nke ha onwe ha. Ego ole na ịba uru ị ga-esi na ha pụta ga-adabere na ngwa ị na-eji, ma inwe ike tụgide obubata omume dị ka a iche iche akara na Ihuenyo mbu nwere ike bara uru n'ihi na ụfọdụ ejikarị ọrụ.
Google si na-gụnyere a collection of mara mma ndụ akwụkwọ ahụ aja na agbanwe na ozugbo mgbe ihuenyo bụ on. A collection of Google Earth gbaa Pan gafee a anya nke ubi na Kent ma ọ bụ na arụsị na Rom, mgbe ndụ data na akwụkwọ ahụ aja egosipụta batrị ụgwọ etoju, nke ugbu a ọnọdụ ihu igwe, ma ọ bụ oge. E nwekwara nhọrọ okirikiri site a collection of ka oyiyi na kwa ụbọchị dị iche iche dị iche iche n'isiokwu ndị dị ka cityscapes, efe n'elu gbaa, Okirikiri ala na ndị ọzọ themes.
Android 7.1 na-now nwere wuru na-na abalị mode, nke Aims iji belata acha anụnụ anụnụ-aj u si ngosi aka n'awa ole nke-acha anụnụ anụnụ ìhè nwuo n'ime anya n'oge awa nke ọchịchịrị. Ime otú ahụ na ọwọrọ aka smartphone ọrụ na-ehi ụra site ịkwụsị acha anụnụ anụnụ wavelengths nke ìhè na-akpali akpali mkpụrụ ndụ n'anya anyị na aza anyị. -Atọ ndị ọzọ ngwa ọdịnala na-eme yiri nke a mgbe na Apple kwukwara a n'abalị mode na iOS 9.3, n'ihi ya, ọ bụghị ihe a ọhụrụ mma, ma ọ dị mma ka-ahụ wuru n'ime Android.
Google nnyemaaka odịbe n'okpuru home button, njikere ịza ajụjụ na ịrụ nkiti ọrụ dị ka mwube Ngụọge. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The kasị hyped ikpehe Google ọhụrụ version nke Android Google nnyemaaka, mabu dị ka Google Ugbu a. Nnukwu ihe dị iche bụ ugbu a ka ọ ga-ekwu okwu azụ gị na ihe ndị ọzọ anya mkparịta ụka olu na mmekọrịta. Ị jụọ ya ajụjụ, ọ na-aza ma na-anọgide na-ege ntị n'ihi na a na-elu iwu ma ọ bụ ajụjụ ndị ọzọ banyere isiokwu.
Etinyere ya n'ọrụ site ma a ogologo pịa na home button ma ọ bụ site n'ikwu na "OK, Google ", Nnyemaaka nwere ike igosi ngwa ngwa aga-eme dị ka mwube Ngụọge, -ezipu ozi ma na-akpọ music, ọkụ ruo searches na ndị ọzọ ọkọlọtọ virtual-nnyemaaka ọrụ, ma ọ dịkwa ihe ndị kasị onye Google nnyemaaka ka ụbọchị. Ọ ga-ahazi na-amụta site na mmasị gị, ma ọ bụghị site ọchụchọ gị ma ọ bụ site gị n'ezoghị iwu.
N'ihi na ọrụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ gam akporo ama, Nnyemaaka bụ nnoo a ubé mma Google Ugbu a na a ukwuu ghọtakwuo aha, ma ọ dịkwa otu n'ime ndị kasị ike olu-enyere aka dị na-eme ka Apple si Siri anya a bit n'azụ ugboro. Google olu ude bụ ọkaibe, na o nwere ohere ọtụtụ ihe ndị ọzọ data ọ bụ ihe ijuanya mgbe ọ na-agaghị azali a bụ eziokwu dabeere ajụjụ karịa mgbe ọ nwere ike.
pixel, ekwentị site Google. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ọ ga-o doro anya na nwee ike na-emekọ ihe nke atọ ọzọ ngwa ọdịnala na ọrụ ikwe ka ndị ọrụ na nanị na-ekwu "OK, Google, ịtụ m ihe über "ma ọ bụ yiri, ma ha na-adịghị ma. I nwekwara naanị na-emekọ ihe nnyemaaka via olu si obubata, ma i nwere ike pịnye ederede n'ime Google search mmanya ma ọ bụ na allo. O yiri anu gbara iche omission, dị ka e nwere mgbe m chọrọ ndopuyo ịjụ ya ajụjụ iji keyboard.
Iji nweta ọtụtụ n'ime ya ị ga-enye gị dijitalụ ndụ n'elu ka Google na na na-nwere ihe ụfọdụ na nzuzo pụtara - ya maara ebe ị na-, ihe ị na-achọ, nwere ike na-agụ ihe bụ na ihuenyo na collates niile na data - ma ọ bụghị a ọhụrụ onu na bụ nanị a progression nke ihe Google na-e-eme n'ihi na nke ikpeazụ na nwunye nke afọ na android. Ma na mkpa gị na-adabere ma ị tụkwasịrị obi Google. Ị adịghị nwere iji nnyemaaka, ọ nwere ike na-agbanyụrịrị.
The ezigbo nkwa nke Google nnyemaaka, Otú ọ dị, bụ na n'agbanyeghị ebe ị na-emekọ ihe ọ, ọ bụ otu nnyemaaka. N'ihi na UK ọrụ Pixel ekwentị na Google si allo ngwa bụ naanị abụọ ebe nnyemaaka dị maka nọ n'ọrụ na mmekọrịta, ma US ọrụ ga-enwe ike ịzụta Google Home, ihe Amazon Echo osompi. Home ga-abịa na UK n'afọ ọzọ.
Google nnyemaaka bụghị a oke nzọụkwụ anya na na Ai agha, ma ọ bụ a siri ike mmalite maka Google na-esonụ na-adọ nke mkparịta ụka na-enyere aka. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya na ya mara na-enwe ike ime ihe niile banyere ekwentị, ndụ gị na ihe ndị ọzọ a anụ ahụ na ọbara onye osote ike, ị ga-emechu ihu.
akara mkpisiaka nyocha
The akara mkpisiaka nyocha na azụ okpukpu abụọ ka a na mpe mpe akwa ka swipe ala ngosi ndo. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
Ikpeazụ afọ Google Nexus phones nwere amamiihe mkpisiaka scanners na azụ. The Pixel na-aga n'ihu na-eji otu emeri usoro: ọ bụ na ngwa ngwa, ezi na ike ugbu a ga-eji mee ka ala na ngosi ndo na a swipe na mpe mpe akwa - ihe ndị ọzọ Nsukka tinyere Huawei na-eme n'ihi na a mgbe. The Pixel Akara nyocha bụ achọghị ịzụ kasị mma na azụmahịa, ma ọ bụrụ na ị na-eji na ekwentị gị na a oche, i nwere ike rụọ ọrụ ya na-enweghị buru ya.
The igwefoto ngwa nwere a ole na ole ọzọ hey na whistles, ma anaghị nwere ọtụtụ ntuziaka njikwa-atọ ndị ọzọ igwefoto ngwa ọdịnala nwere si Samsung, Huawei, LG na ndị ọzọ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The Pixel si 12.3-megapixel igwefoto na-cracking. Camera fim ike DxoMark họọrọ ya ubé n'elu ndị ọzọ nile ama ese foto na o doro anya ihe mere, dị ka ọ bụ nnọọ ike na-a ihe efu foto na ya.
Na ezi ìhè ị na crisp, ọma ikpe photos na ihe ndị magburu onwe ego nke ezi zuru ezu. Google si HDR + mma bụ karịsịa ọma, amị ụfọdụ ndị kasị mma elu ike iche photos Ahụwo m na-enweghị image blur na ike creep na na ndị ọzọ na usoro.
Low na ogbenye ìhè arụmọrụ bụ nwekwara ndị magburu onwe, n'agbanyeghị camera agaghị enwe ngwa anya image stabilization, mgbe Google Camera ngwa ugbu a nwere ụfọdụ mkpa nke ukwuu amara atụmatụ, gụnyere ike ka ịgbanwee akpaka-acha ọcha itule na mgbata nke a button na a ọlaedo ruru okporo, nke na-enyere gị na-ede gị photos. The igwefoto mbọ n'ụzọ ziri ezi mata ọrụ fluorescent ọkụ, Otú ọ dị, ahapụ oyiyi na ihe a odo tint. Ahọpụta fluorescent ọkụ nhọrọ gbazie ya.
Full ntuziaka akara na-adịghị gụnyere - ị ga mkpa a-atọ ndị ọzọ ngwa n'ihi na - ma o nwere ọtụtụ ihe ọtụtụ ndị ga-mkpa na a kwa ụbọchị ndabere. Agbapụ wupu photos site jide ndị shutter button ọbụna na-emepụta a gif si dapụtara stills.
8-megapixel selfie igwefoto a dịkwa mma, amị oyiyi na ihe ọma omimi na agba. Kasị selfie ese foto bụ ndị ma nro na-enweghị zuru ezu ma ọ bụ ike ma weghara bụla ndọlị na pore na ihu, ma Pixel si azọchakwa na ezi akara na adụ, ebu isi na-elekwasị anya na-enweghị adịkwa ukwuu zuru ezu.
The azụ nwere a iko panel ekpuchi elu-atọ nke ngwaọrụ. Foto: Samuel Gibbs maka Guardian
The iko panel na azụ AIDS adịgide site index mkpịsị aka
Ọ nwere nani otu ala-firing ọkà okwu na ala, nke na-adị mfe egbochi site aka mgbe Ịgba Cha Cha
Google Photos na Pixel abịa na free, na-akparaghị ókè full mkpebi foto na video ndabere, ọ bụghị naanị ruo 16MP na 1080p video
The ngosi ikanam na-adịghị nyeere ndabara, ma dị na ngosi ntọala
Gif search na-wuru n'ime Google si Keyboard maka ngwa na-akwado ya dị ka SMS ozi ngwa
The kalenda ngwa ugbu a na-egosi na ezi ụbọchị na home ihuenyo
The odori mita bụ etịbe: na 96% ọ na-ekwu nkeji anọ ruo mgbe mere ma were 17 nkeji iru 100%
Na akwụkwọ ahụ aja na-ejikarị ihe m kpebiri na m na-echefu, ma m mmasị n'ezie ọhụrụ ndụ Google Earth oyiyi
The Pixel efu £ 599 na 32GB nke nchekwa ma ọ bụ £ 699 na 128GB nke nchekwa na nwa ma ọ bụ ọlaọcha. Ọ bụkwa dị na-acha anụnụ anụnụ na US.
n'ihi na ha tụnyere, Apple si iPhone 7 na-efu £ 599 na 32GB nke nchekwa, Samsung si Galaxy S7 efu gburugburu £ 500, na Huawei P9 efu £ 449 na OnePlus 3 na-efu £ 329.
Ma ekwentị onwe ya bụ naanị ruo par na nke kacha mma nke ndị ọzọ na-adịghị leagues n'ihu. The imewe bụ bụghị dị ka otutu ma ọ bụ na-akpali dị ka na-emepụta site Samsung. Ọ bụghị waterproof, ma, na ọ na-adịghị nwere expandable nchekwa. The igwefoto bụ oké, n'ihi ya, bụ ihuenyo na Mee quality bụ magburu onwe, ihe niile ị ga-atụ anya n'aka a £ 600 ama ke 2016.
Ọ bụrụ na Google Nzube bụ iti Apple, ya mere na ndụ batrị naanị. Ọ bụrụ na ọ bụ na-aka nke ugbu a eze gam akporo, Samsung si Galaxy S7 akara, mgbe n'ihi bụ obere anya.
Uru: oké igwefoto, ezi ákwà ngebichi, a ụbọchị ndụ batrị, Android 7.1 Nougat, Google nnyemaaka, oké akara mkpisiaka nyocha
Ọghọm: ọ bụghị waterproof, dịghị expandable ebe nchekwa, dịghị n'ihu-eche ihu ọkà okwu, ọ dịghị wireless Nchaji, oké ọnụ
A review nke ibu Google Pixel XL na a 5.5in ihuenyo, ama mpi na iPhone 7 Ọzọ na Samsung Galaxy S7 Edge, ga-abụ dị n'izu ọzọ
OnePlus 3 nyochaa: flagship ekwentị na ufọt ufọt nso price
Honor 8 nyochaa: Huawei si dị ọnụ ala karịa ama bụ nnọọ mkpụmkpụ nke amamiihe
HTC 10 nyochaa: n'ebe na Samsung mma
Huawei P9 review: aiming maka nnukwu ụmụ nwoke ma dị nnọọ na-efu on software
LG G5 review: a ike ọrụ enyi na dị nnọọ eleghara akara
Google Nexus 5X nyochaa: ndị mmadụ Android ekwentị?
iPhone 7 nyochaa: otú ezi nwere ike a na ekwentị abụ ma ọ bụrụ na batrị adịghị adịte ọbụna a ụbọchị?
AMD ọkwa na 'ụlọ ọrụ mbụ' ...
LG G Flex aka-na Review!
RIAA chọrọ Google ime ihe na-alụ ọgụ 'pirac ...
Twitter nku ebipuworo site na-adịghị ike ọrụ ibu
mkpụrụ okwu, Android, Apụl, Nkeji edemede, Google, mobile igwe, pixel, Nyocha, Samuel Gibbs, Smartphones, software, Technology, telecoms, UK Technology, Voice ude
← Nke Keyboard na Òké M Kwesịrị Zụrụ My PC? Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 9: Ị chọrọ n'ezie ka a 5.9in Phablet? →
636 -eso ụzọ
Mpịachi ákwà na 5G: ihe na-abịa na smartphones na 2019?
The 20 kacha mma Ngwa nke 2018